कोरोना संक्रमित भएर घरमै बसिरहनु भएको छ ? के गर्ने र के नगर्ने ? - Lite Nepal
संक्रमित बिशेषत लक्षण बिहीन र लक्षण सहितको देखिने गरेको पाइन्छ । केहि समय अघिसम्म संक्रमितहरुमा लक्षण नदेखिनु ९९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो भने हाल केहीमा लक्षणहरु देखिन शुरु भएको सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरेको छ ।
शुरुआतीको समयमा संक्रमितहरुमा लक्षण नदेखिदा पनि अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरेको थियो । तर हाल संक्रमितको संख्या बढ्दै जादा लक्षण नदेखिनेहरुलाई अस्पताल भर्ना नगर्ने निर्णय संगै संक्रमित कहाँ बस्ने भने रनभुल्लमा परेको देखिन्छ ।
घर जाउ परिवारलाई कोरोना सर्छ कि भन्ने डर भएको देखिन्छ । एउटा कोठा मात्र भएका वा बिभिन्न कारणले संक्रमण आफ्नो परिवारको सदस्यलाई सर्न सक्ने जोखिम र अवस्था भए उनीहरुको लागि सरकारले कहाँ र कसरी राख्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने योजना बनाउन सक्दछ ।
बिभिन्न देशहरुले जस्तै रंगशाला, खुलाठाउँ आधिको प्रयोग गरि त्यस्ता ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमित राख्ने अस्थायी प्रकृतिको घर बनाएर स्वस्थाकर्मीको निगरानीमा राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा सक्रमित पनि आस्वथ हुने र संक्रमण अरु फैलने सम्भावना कम भएर जानेछ ।
होम आइशोलेसन बस्ने निर्णय गरेको हो भने माथि उल्लेखित सतर्कताहरु अपनाउनु अति जरुरी हुनेछ, किनभने कोरोनाको महामारी अरु फैलन नदिन द्रूत गतिमा संक्रमित पत्ता लगाउने, कन्ट्याक ट्रेसिंग गर्ने र संक्रमितहरुबाट थप अरुलाई नसरोस भन्नका लागि व्यवस्थित र सुरक्षित आइशोलेसनको व्यवस्था हुन अति जरुरी हुनेछ ।
लेखक पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘संसद् विघटन मैले गरेको हुँ, अरुलाई किन हमला ?’
कांग्रेसले आज ७ सय ५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन गर्ने
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले शेरधन राईले गर्ने भए विवाह !
१.प्रधानमन्त्रीले भने ‘संसद् विघटन मैले गरेको हुँ, अरुलाई किन हमला ?’
२.कांग्रेसले आज ७ सय ५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन गर्ने
३.प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले शेरधन राईले गर्ने भए विवाह !
४.झापाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा आगलागी एक जनाको मृत्यू
५.प्रधानमन्त्रीले भारतीय मिडीयामा भने : ‘हामी दुवै मुलुकसँग मित्रवत् व्यवहार गर्दछौं’
६.ओली समूहको अन्तरपार्टी निर्देशिका : निर्वाचनमा जुट्न निर्देशन
७.विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न विज्ञापन बोडको चेतावनी